NDỊ NA-AKWỌ ỤGBỌALA MAKA CANON CANON LBP 6000 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Download ndị ọkwọ ụgbọala maka onye nbipute Canon i-SENSYS LBP6000
Tunngle abụghị ọrụ Windows nyere, mana ọ na-arụ ọrụ n'ime usoro maka ọrụ ya. Ya mere ọ bụghị ihe ijuanya na usoro nchekwa dị iche iche nwere ike igbochi ọrụ nke usoro ihe a. Na nke a, koodu mmejọ nke koodu 4-112 pụtara, mgbe nke a gasịrị, Tunngle akwụsịre ịrụ ọrụ ya. Ekwesiri idozi ya.
Njehie 4-112 na Tunngle bụ ihe nkịtị. Ọ pụtara na usoro ahụ enweghị ike ịme njikọta UDP na ihe nkesa, ya mere enweghị ike ịrụ ọrụ ya.
N'agbanyeghị aha njirimara nke nsogbu ahụ, ọ dịghị ejikọta na njehie na enweghị ike njikọ na Ịntanetị. Ogologo oge niile, ezigbo ihe kpatara njehie a na-egbochi njikọ njikọ na nkesa site na ichebe kọmputa. Ndị a nwere ike ịme nje virus, firewall ma ọ bụ ihe ọ bụla firewall. Ya mere ọ bụ ihe ọjọọ na-arụ ọrụ na usoro nchekwa kọmputa.
Dika ekwuru ya, odi nkpa iji dozie usoro nchedo kọmputa. Dịka ị maara, enwere ike ichebe nchebe n'ime abụọ n'ime mmadụ, ya mere, ọ bara uru iji emeso onye ọ bụla n'otu n'otu.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na nanị ịmebido usoro nchebe abụghị ngwọta kachasị mma. Tunngle na-arụ ọrụ site n'ọdụ ụgbọ mmiri n'èzí, site na nke ị nwere ike ịnweta kọmputa onye ọrụ site n'èzí. N'ihi ya, nchekwa kwesịrị ịdị na-aga n'ihu. Ya mere, a ga-ehichapụ ya ozugbo.
Nhọrọ 1: Antivirus
Mgbochi, dị ka ị maara, dị iche, na ụzọ ọ bụla ma ọ bụ ọzọ, ha nwere azịza onwe ha na Tunngle.
Nke mbụ, ọ bara uru ịhụ ma ọ bụrụ na nchịkwa nchịkwa Tunngle adịghị "Kwainiini". Antivirus. Iji lelee eziokwu a, gaa na nchekwa ihe omume wee chọta faịlụ ahụ. "TnglCtrl".
Ọ bụrụ na ọ dị na nchekwa, antivirus emetụghị ya.
Ọ bụrụ na faịlụ ahụ na-efu, antivirus nwere ike ibudata ya. "Kwainiini". Kwesịrị ịpụ ya n'ebe ahụ. Onye ọ bụla antivirus mere ya iche. N'okpuru ị nwere ike ịchọta ihe atụ maka avast! Antivirus!
Gụkwuo: Quarantine Avast!
Ugbu a, ị ga-agbalị ịgbakwunye ya na ihe ndị ọzọ maka antivirus.
Gụkwuo: Otu esi etinye faịlụ na antivirus
Ọ bara uru ịgbakwunye faịlụ ahụ "TnglCtrl", ọ bụghị dum nchekwa. A na-eme nke a iji mee ka nchekwa nke usoro ahụ dịkwuo mma mgbe ị na-arụ ọrụ na mmemme na-ejikọ site n'ọdụ ụgbọ mmiri n'èzí.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ na-anọgide na ịmalitegharịa kọmputa ma gbalịa ọzọ ịme ihe omume ahụ.
Nhọrọ 2: Firewall
Site na firewall usoro usoro ahụ bụ otu ihe ahụ - ịkwesịrị ịtinye faịlụ na ndị ọzọ.
Mbụ ị ga-abanye "Nhọrọ" usoro.
Na ebe nyocha ị chọrọ ịmalite ịpị "Firewall". Usoro ga-egosi ngwa ngwa nhọrọ ndị metụtara ajụjụ ahụ. N'ebe a, ị ga - ahọrọ nke abụọ - "Ikwenye na-emekọrịta na ngwa site na firewall".
Ndepụta nke ngwa ndị agbakwunyere na listi nchọta maka usoro nchedo a ga-emeghe. Iji dezie data a, ịkwesịrị ịpị "Gbanwee Ntọala".
Ị nwere ike ime mgbanwe na ndepụta nke nhọrọ dịnụ. Ugbu a ị nwere ike ịchọ Tunngle n'etiti nhọrọ. A na-akpọ ụdị dị iche iche anyị nwere mmasị "Ọrụ ntụgharị". Ekwesiri inwe akọrọ na nso ya ọ dịkarịa ala maka "Nnweta Ọhaneze". Ị nwere ike itinye ma maka "Onwe".
Ọ bụrụ na nhọrọ a na-efu, a ghaghị itinye ya. Iji mee nke a, họrọ "Kwe ka ngwa ọzọ".
Mgbanwe ohuru ga-emeghe. N'ebe a, ị ga-ezipụta ụzọ na faịlụ ahụ "TnglCtrl"wee pịa bọtịnụ ahụ "Tinye". A ga - agbakwunye nhọrọ a ozugbo na ndepụta nke ndị ọzọ, ihe niile fọdụrụ bụ iji nweta ohere maka ya.
Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịchọta Tunngle n'etiti ndị ọzọ, mana ọ bụ n'ezie ebe ahụ, mgbe ahụ, mgbakwunye ga-enye ajọ omume ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike Malitegharịa ekwentị gị ma gbalịa tungnle ọzọ.
A ghaghị iburu n'obi na na ụdị firewall dị iche iche nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche nchedo nchebe. Ya mere, ụfọdụ ngwanrọ nwere ike igbochi Tunngle ọbụna ma ọ bụrụ na ọ nwere nkwarụ. Ọbụna karịa - A pụrụ igbochi tunngle ọbụna n'ọnọdụ a na-agbakwunye ya na ndị ọzọ. Ya mere ọ dị mkpa iji hazie firewall n'otu n'otu.
Dịka iwu, mgbe ịmechara usoro nchedo nke na ọ gaghị emetụ Tunngle, nsogbu na njehie 4-112 adịghị. Mkpa ịkwaghachị ihe omume ahụ anaghị ebili, ọ bụ naanị ịmalitegharịa kọmputa ma nwekwaa egwuregwu kachasị amasị gị na ndị ọzọ.